Dekedda ugu weyn Bariga Afrika oo laga Dhisayo Tanzania – Radio Daljir
Dekedda ugu weyn Bariga Afrika oo laga Dhisayo Tanzania
Oktoobar 18, 2015 3:50 b 0
Axad, Oktoobar 18, 2015 (Daljir) —Dowladda Tanzania ayaa shaacisay in ay billaabayso dhismaha dekedda ugu weyn Bariga Afrika, taasoo dhismaheeda laga billaabayo xeebta loo dalxiis tago ee magaalada Bagamoyo.
Dekeddan ayaa waxay qaadi doontaa 20-milyan oo konteenar sannadkiiiba, taas oo ah laba jibaar xajmiga ay qaaddo dekedda magaalada Darusalam ee caasimadda dalka Tanzania.
Mashruucan ayaa waxaa ku bixi doonta lacag dhan 11-bilyan oo doollar, iyadoo inta badan lacagtan ay ku deeqi doonto xukuumadda Shiinaha oo dhisaysa dekeddaan cusub oo loogu magac-daray Bagamoyo.
Sidoo kale, xukuumadda Tanzania ayaa sheegtay in dhismaha dekedan lagu soo gunaanadi doono muddo laba sano gudahood ah, isla markaana loo sameynayo waddooyin ay maraan gaadiidka iyo kuwo ay maraan tareennada.
Mas’uuliyiinta xukuumadda Darusalaam ayaa sheegay in dekeddaan ay noqonayso mid ay kula tartamaan waddanka ay dariska yihin ee Kenya ganacsiga gobolka iyo kan caalamiga ah, iyagoo sheegay inay dhismaha dekeddan muhiimad weyn ugu jirto dalkooda.
Bagamoyo ayaa waxay u jirtaa qiyaastii 75-km magaalada Daarusalam ee dalka Tanzania, iyadoo ah magaalada uu kasoo jeedo madaxweynaha Tanazania Jakaya Kikwete, iyadoo la filayo inuu dhagax-dhigo dhismaha dekedan cusub.
Ugu dambeyn, Bagamoyo ayaa ahaan jirtay caasimadii gumeystihii Jarmalka oo ku sugnaa Bariga Afrika. Waxay kaloo ahayd magaalladii la isugu geyn jiray dadka adoonsi ahaanta loo qabsado ka hor intaan la dhoofin.
Dowladda Ingiriiska oo Sheegtay in Jihadi John uu Somalia ku soo wajahan-yahay
Deegaano hoostaga Buuhoodle oo laga Roobsaday